महाधिवेशनको माहोलले आगामी निर्वाचनमा चितवनको किल्ला थप मजबुत बनाउने एमालेको रणनीति हुनसक्छ । पूर्वमाओवादी खेमालाई शसक्त बनाएर एमालेले प्रण्चडलाई गलाउन चाहन्छ ।
चितवन । एमालेको ३०१ केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यमध्ये निर्विरोध हुन नसकेका पदमा सोमबार राति नौ बजेदेखि एक बजेसम्म मतदान हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगको संशोधित कार्यतालिका अनुसार मतदानको कार्यक्रम पुनः पछि धकेलिएको हो । निर्वाचन प्रक्रियासँगै सर्वसहमतिको प्रयास भइरहेका बेला निर्वाचन समितिले निर्वाचन कार्यक्रम संशोधन गर्दै मतदानको समय निर्धारण गरेको हो । संशोधित कार्यतालिका […] The post एमाले महाधिवेशन : राति नौ बजेदेखि एक बजेसम्म मतदान appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.
सौराह, चितवन । नेकपा एमालेको १० महाधिवेशनमा उपस्थित भएका प्रतिनिधि आइतबार दिनभर बेरोजगार भए । बिहान १० बजे सुरु हुने भनिएको महाधिवेशन दिनभर सुरु नहुँदा उनीहरू बेरोजगार भएका हुन् । शनिबार राति बन्दसत्रले पार्टीको विधान संशोधनसहितका प्रस्तावमा छलफल गरी निर्णय गरेपछि बन्दसत्र अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नयाँ नेतृत्व चयनका लागि पदाधिकारी र केन्द्रीय […] The post दिनभर बेरोजगार एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.
एमाले महाधिवेशन हेर्न चितवन आएकाहरू भन्छन् : अब भाषण होइन, विकास चाहिन्छ
१० मंसिर, चितवन । अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाका नेत्रप्रसाद पराजुुली १६ घण्टाको बस यात्राबाट शुक्रबार चितवन आइपुगे । नेकपा एमालेको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हेर्न चितवन आइपुगेका उनी आफू कांग्रेस समर्थक भएको बताउँछन् । ‘म एमालेको कार्यकर्ता होइन । तर, केपी ओलीको शुभेच्छुुक भएकाले यहाँ आएको हुँ,’ पराजुलीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अरु नेता भन्दा ओली मलाई मन […]
मौसमले साथ नदिएको एमाले महाधिवेशन
चितवन, १० मंसिर । नेकपा एमालेको महाधिवेशन चितवनमा सुरु हुँदैछ । आजबाट महाधिवेशन सुरु हुनलाग्दा मौसम भने धूमिल छ । चितवन मात्र नभई काठमाडौंलगायत आसपासका क्षेत्रको मौसम पनि सफा छैन । मौसम सफा नहुँदा विमानहरुको उडानमा ढिलाई भइरहेको छ । अहिले चितवनको आकाश सफा छैन । भिजिविलिटी कम छ । मध्यान्हसम्म आकाश अझै राम्ररी खुलेको […]
एमाले महाधिवेशन उद्घाटनमा सहभागी हुन देशभरिबाट चितवन आउँदै कार्यकर्ता
चितवन – नेकपा एमालेका दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा सहभागी हुन देशभरका एमाले कार्यकर्ता र शुभेच्छुक चितवन आउने क्रम जारी छ। नारायणी नदीको तटमा आयोजना गरिएको उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुन आइपुगेका नेता–कार्यकर्ताले चितवनको सडक भरिभराउ छ। ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ भने सर्वसाधारणले सार्वजनिक सवारीसाधन सजिलै चढ्न पाएका छैनन्। चितवन आइपुगेका एमाले कार्यकर्ताहरुको केही तस्विर […]
आदिवासीका आँखामा एमाले महाधिवेशन
९ मंसिर, चितवन । नेकपा एमालेको महाधिवेशनका लागि चितवन अहिले गुल्जार छ । शुक्रबारदेखि शुरु हुने महाधिवेशनमा सहभागी हुन देशैभरका प्रतिनिधि चितवन पुग्ने क्रम चलिरहेको छ । देशभरबाट करिब ५ लाख मानिसलाई भेला गरेर उद्घाटन गरिने एमालेको १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा यसपाली बैचारिक राजनीतिक बहस हुने छैन, किनभने एमालेले त्यो काम गत असोजमै विधान महाधिवेशनमार्फत् पुरा […]
एमाले महाधिवेशन - ४४ ठाउँमा स्वागत गेट, 'सेल्फी प्वाइन्ट' मा मदनदेखि लेनिनसम्मका तस्बिर